सुकदेव र ज्योति ओभरअल विजेता – Digital Khabar
सुकदेव र ज्योति ओभरअल विजेता
By digitalkhabar Last updated Apr 12, 2021
३० चैत, काठमाडौं । सुकदेव कार्की र ज्योति थापा रुप कार्की स्मृति प्रथम नेपाल्स स्ट्रोङगेष्ट राष्ट्रव्यापी पावर लिफ्टिङ प्रतियोगितामा ओभरअल विजेता बनेका छन् । सुकदेव पुरुष तथा ज्योति महिलातर्फ च्याम्पियन बनेका हुन् ।
नेपाल पावर लिफ्टिङ संघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा सुकदेव र ज्योति आ–आफ्नो स्पर्धामा पनि पहिलो भए । सुकदेव ५९.१–६६ केजी तथा ज्योति ६० केजीमुनि तौलसमूह पहिलो भए । दुवैले ओभरअल विजेता बनेवापत ५१ हजार नगद पुरस्कार हात पारे । स्पर्धामा पहिलो भएवापत दुवैलाई छुट्टै जनही १० हजार नगदबाट पुरस्कृत गरियो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा भएको प्रतियोगिताको पुरुष ५९ केजीमुनि हर्क राई, ६६.१–७४ केजीमा रविन राई, ७४.१–८३ केजीमा ओजशचरण जोशी, ८३.१ देखि ९३ केजीमा आदित्य चौधरी र ९३ केजीमाथि डा. मोहित कार्की पहिलो भए ।
महिला ६० केजीमाथि सुजिता मानन्धरले शीर्ष स्थान हात पारिन् । पुरुष भेट्रानको ४०–५० वर्षमा टेकेन्द्र गुरुङ तथा ५० वर्षमाथि राजकुमार घजु पहिलो बने ।
१० स्पर्धामा समावेश प्रतियोगिताको हरेक स्पर्धामा पहिलो हुनेलाई १० हजार, दोश्रोलाई ५ हजार र तेश्रोलाई ३ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजक समितिका सचिव सुरेश सुवेदीले जनाएका छन् । एकदिने प्रतियोगितामा ७३ पुरुष र २८ महिला गरी १ सय १ खेलाडी सहभागी थिए ।
अमेरिकामा बस्दै आएका पावर लिफ्टिङका मास्टर्सतर्फका दुई पटकका विश्व च्याम्पियन स्व. रुप कार्कीको स्मृतिमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । नेपालमै रहेका बेला केहि महिनाअघि उनको हृदयघाटका कारण निधन भएको थियो ।
बागेश्वरीका रोम स्यामा र महेन्द्रकी तनिशा भैल भक्तपुर जिल्ला स्तरीय उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन गेम्सका लागि सञ्चालित छनोट प्रतियोगिताको तेक्वानदोमा आइतबार पहिलो भएका छन् । छात्र ३२–३५ केजीमा रोम र छात्रा २९–३२ केजीमा तनिशा पहिलो भएका हुन् ।
भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको पुरुष ३५–३८ केजीमा लिशाका विजय लामा, ३८–४१ केजीमा पुकार जोशी र एकल पुम्सेमा अक्सफोर्डका वविन्स सतशंकरले स्वर्ण जिते । छात्रा ३२–३५ केजीमा पारागनकी जेनिफर दुवाल, ३५–३८ केजीमा समताकी ईशा राई र एकल पुम्सेमा अक्सफोर्डकी सोनिया तामाङ पहिलो भए ।
उसुको छाङछ्वानतर्फ छात्रमा महेन्द्र शान्तिका लजन सिन्जाली मगर र छात्रामा मेघाकी मनीता कोजु, नान्छ्वानको छात्रमा मनोरमका सुवेश खिउजु र छात्रामा जेसिसकी कसिस गोथे तथा ताइची छ्वानको छात्रमा आदर्श जनप्रेमीका तोवित हाङ राई र छात्रामा जेसिसकी अदिती विर्वलले शीर्ष स्थान हात पारे । तेक्वान्दो र उसुमा पहिलो हुने सबै खेलाडी केन्द्रीय प्रतियोगिताका लागि छनोट भएका छन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार कराते, कबड्डी र टेबलटेनिसको खेल हुने आयोजक समितिका कार्यालय प्रमुख बाबुकाजी (विके) श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
सरोजलाई दोहोरो स्वर्ण
भारतका सरोज गुरुङले दोश्रो इन्डो–नेपाल खुला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा आइतबार दोहोरो स्वर्ण जितेका छन् ।
नेप्सेमा सिभिल बैंकको बोनस शेयर सुचिकृत